Nepal Dayari | प्रकाश सपुतले यिनै दुईओटा गीतबाट काठमाडौँमा भब्य बंगला किनेका थिए !
साउन ५, २०७८ मंगलबार ७३४ पटक हेरिएको
गलबन्दी, बोलमाया जस्ता कालजयी र बहुचर्चित गीत गाएर करोडौँ रकम कमाएका लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुतले यिनै दुईओटा गीतबाट काठमाडौँमा किने भब्य बंगला,
हिरोइन जस्ती सुन्दरी पत्नि र छोराछोरी सहित बस्छन् करोडौँको उक्त घरमा, बनाग्लुगंका प्रकाश कसरी बन्न पुगे करोडपति गायक ? हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो
यो पनि पढ्नुहोस् : श्रीमतीको कान काट्ने एक जना श्रीमान प-क्रा-उ प-रेका छन् । बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर-१ भण्डार गाउँका २५ वर्षिय मनोज नेपाली प।क्रा।उ प-रेका हुन् ।
मनोजले दुई दिन अघि २१ वर्षीया श्रीमती जानकी नेपालीको बायाँ का-न का।टिदि।एका थिए । श्रीमानले का-न का।टिदि।एपछि जानकी का-नको टु।क्रा लिएर जिल्ला अ-स्पता-ल बझाङ पुगेकी थिइन् ।
घ-ट-ना भएकै दिन उनी अ।स्पताल पुग्न सकिनन् । कसैको सहयोग नपाएपछि उनी अ-सहा-य पी।डा।मै बसिन् । माइतीलाई पनि खबर गर्न सकिन न्। शुक्रबारमात्रै एक जना महिलाले उनलाई अ।स्प।ता।ल पुर्‍याइदिइन् ।
पछि खबर सुनेर उनका आमा-बुवा पनि आए । मनोजले जानकीमाथि कु।टपि।ट गरी च-क्कु-ले कान का-टे-का थिए । मनोज प्राय : घरमा म-दि-रा से।वन गरेर आउँथे ।
गत बुधबार पनि म।दिरा से।वन गरेर आएका मनोजले जानकीमा-थि कु।टपि।ट गरेका थिए। उनले बुधबार दिउँसो एक जना आफन्तसँग हाँसेको निहुँमा कु।टेका थिए।
१५ वर्षको उमेरमा कक्षा ९ पढ्दा नै जानकीको विवाह भएको थियो । २१ वर्ष मात्रै भएकी उनका अहिले तीन छोराछोरी छन् । सानै उमेरमा विवाह गरेकी जानकीलाई श्रीमानले बेलाबेला दिइरहने हिं।सा र या।तना।ले आफू पी-डा-मा रहेको बताउँछिन् ।
बिहे गरेकै दिनदेखि उनलाई श्रीमानले गालीगलौज र कु।टपि।ट गर्न थालेका थिए । तर उनी चु-पचा-प सहेर बस्थिन् । अहिले कान नै का-टिदि-एपछि श्रीमानको या-त-ना-बारे सुनाउन बा-ध्य भएको बताउँछिन् ।
जानकीलाई पनि मनोजले दुई वर्षअघि भारत लगेका थिए । त्यहाँ पनि श्रीमानले टा-उ-कोमा ग्यास सिलिन्डरले हि-र्का-एको बताइन् । त्यो बेला उनी दुई महिनासम्म बे-हो-स भएकी थिइन्।
त्यसपछि पनि उनी एक वर्ष अ-स्प-तालमै बसिन् । भारतमै मनोजविरूद्ध प्र-ह-रीमा उ-जु-री दिने तयारी गरे पनि त्यतिबेला सासूले रोकिन् । या-त-ना सहन नसकेर कति पटक त उनले आ-त्मह-त्या नै गर्ने भन्दै निस्किइन् ।
तर छोराछोरीको मायाले उनी फ-र्कि-न बा-ध्य हुन्थिन् । अ-स्पता-ल-मा कानको उ-प-चा-र गरेपछि जानकी आइतबार डेढ वर्षे बच्चासहित अ-ल्पका-लीन महिला सु-रक्षित आवास गृहमा पुगेकी छन् ।
का-न-को प-ट्टी फेरिरहनु पर्ने भएकाले उनले चैनपुरमै बस्नुपर्ने छ। डेरा गरी बस्न उनको आर्थिक क्षमताले नभ्याएपछि आफन्तले केही दिन बास दिन अनुरोध गरेको आवास गृहकी प्रमुख गीता शाहीले बताइन् ।
‘अहिले उहाँको अवस्था केही सुधारोन्मुख छ । हामीले परामर्श र न्यायका लागि सहयोग गर्नेछौं,’ उनले भनिन् । हिं।सा र या।त।ना दिनेलाई क।डा स।जा-य पाउनुपर्ने जानकीका आमाबुबाको भनाइ छ।
जिल्ला प्र-ह-री कार्यालय बझाङका प्र।ह।री नायब उ-प-रीक्ष-क रुपक खड्काले जानकीका आफन्तले घ-ट-ना-बारे जा-हे-री दिएको बताए। उ-जु-री प्राप्त भएपछि जानकीका श्रीमान मनोज प-क्रा-उ परेका छन् ।
उनलाई आइतबार दिउँसो प-क्रा-उ गरिएको खड्काले बताए । ‘पी-डि-त पक्षबाट प्राप्त जा-हे-री-का आधारमा आ-रो-पी-लाई प-क्रा-उ गरिएको छ। यसपछि मु-द्दा दर्ताको प्रकृया अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने ।